Umongameli waseTanzania ubeka isibonelo ngokuqoqa udoti emgwaqweni - i-Afrikhepri Fondation
Umongameli omusha uqoqa udoti emgwaqweni
UMongameli waseTanzania ubeka isibonelo ngokuqoqa udoti emigwaqweni
Funda: 3 amaminithi
Dn uhlaka lomkhankaso wokukhuculula lapho abeka khona esikhundleni semikhosi yenkululeko yaminyaka yonke, umongameli omusha waseTanzania, uJohn Magufuli, uzihlanganise nabantu ngoLwesithathu ukuqoqa udoti eDar-es- I-Salaam.
Phambi kwamehlo ababukeli abaningi, uJohn Magufuli usebenzise ifosholo, nabadobi abayishumi nambili bezosusa amaqabunga nodoti wepulasitiki emakethe yezinhlanzi, eduze kwesigodlo sikamengameli eDar-es-Salaam, inhlokodolobha. kwezomnotho. Njengesakhamuzi esijwayelekile, umongameli omusha waseTanzania waqoqa udoti ngezandla zakhe, enza isibonelo.
“Masisebenzisane ukugcina izwe lethu, amadolobha ethu, amakhaya ethu nezindawo esisebenza kuzo kuhlanzekile,” kusho yena emamatheka.
Imisebenzi yokukhuculula yenzeka kuwo wonke umnotho wezomnotho, lapho amafu wentuthu enyuka khona emoyeni, izakhamizi zishisa inqwaba kadoti. Futhi lolu, usuku lwesikhumbuzo senkululeko yezwe.
Ngokushesha nje eza emandleni Ngempela, uMnu. Magufuli uthathe isinqumo ekuqaleni kukaNovemba sokusula imikhosi yonyaka yenkululeko ukuze onge imali futhi ayinikele kulo mkhankaso wokuhlanza, ukulwa nekholera.
"Kuyihlazo nje ukuthi sichitha imali eningi ukugubha iminyaka engama-54 sathola inkululeko ngenkathi abantu bethu bebulawa yikholera," isifo esesibulale abantu abangu-150 ezinyangeni ezintathu ezedlule eTanzania ngokusho kweWorld Health Organisation. -umemezela.
Jakaya Kikwete, umshanelo esandleni
OwayenguMongameli uJakaya Kikwete, owashiya esikhundleni ekuqaleni kukaNovemba ngemuva kokusebenza imigomo emibili egunyazwe ngumthethosisekelo, naye wadlala umshanelo edolobheni lakubo laseChalinze, amakhilomitha ayikhulu entshonalanga neDar- es-Salaam.
Emasontweni ambalwa, uJohn Magufuli usephindaphinde izinhlelo ezihlose ukulwa nenkohlakalo nokumoshwa kwemali yomphakathi
“Ngijabule ngalokhu kuzivocavoca umzimba okuncane. Asisekele ngokugcwele kumengameli emkhankasweni wakhe wokulwa nekholera nazo zonke ezinye izifo ezithathelwanayo, ”kusho yena kuthelevishini kazwelonke.
Lowo owayenguMengameli wezwe uthe umhlabile umlandeli wakhe, oqhamuka eqenjini elilodwa naye, i-Chama Cha Mapinduzi (CCM), iqembu elaliyilungu elilodwa nelisemandleni selokhu kwavela ubumbano lwezinhlanga eziningi ngo-1992.
“Ngigculisekile ngezinyathelo azithathayo ukulwa nokungasebenzi ngendlela efanele, ukweqa intela nakho konke okungalungile ekusebenzeni kwehhovisi lomphakathi. Ngiyaziqhenya ngaye, ”kusho yena.
Emasontweni ambalwa, UJohn Magufuli uqinise izinhlelo okuhloswe ngazo ukulwa nenkohlakalo nokumoshwa kwemali yomphakathi. Ucacise ngokumisa ukumiswa kohambo olungaphoqelekile lwaphesheya kwezilwandle lwezikhulu zikahulumeni, wavimbela ukuthengwa kwamathikithi ezindiza ezindiza zabaphathiswa bakhe futhi wafuna ukuthi imihlangano kahulumeni ibanjelwe ezakhiweni zomphakathi kunokuba amahhotela kanokusho.
Ungaba kanjani nempilo enhle: Izifundo ezivela ocwaningweni olude lwenjabulo
Imfihlakalo yamandla amnyama ekudalweni
Buka amaqembu amakhulu (i-2007)
Detoxation ne-Angels - Doreen Virtue (Audio)